I-sundowns idingise umdlali wase-argentina | Ilanga News
Home Ezemidlalo I-sundowns idingise umdlali wase-argentina
IMAMELODI Sundowns ‘idingise’ umdlali wase-Argentina kwiPre-mier Soccer League (PSL) okuvela ukuthi ubezama ukwenza ubutsotsi.
ISundowns ithuse abathandi bebhola imemezela ukuthi seyinqamule inkontileka ka-Emmi-liano Tade (osesithombeni) ngoba ethi useyaliyeka ibhola.
Lo mdlali uveze ukuthi ufuna ukuyokwenza amabhizinisi ngakubo e-Argentina. Zijikile izinto njengoba ngoLwesibili ethulwe yikilabhu yakhe yakudala i-Auckland City yaseNew Zealand asebuyela kuyona ihlandla lesithathu.
Unomlando omuhle kule kilabhu njengoba ephethe irekhodi lokushaya amagoli amaningi kunabo bonke abadlali asebeke badlala kuyona. Useyishayele amagoli awu-97 emidlalweni ewu-193.
Leli phephandaba lihoshe ngemithombo yalo ukuthi lo mdlali ubuyela eNew Zealand nje, yingoba ngesikhathi etshela iSundowns ukuthi uyaliyeka ibhola imsayinise amaphepha okuthi uma eke wasayina nekilabhu yakuleli izombopha izandla nezinyawo.
Kuthiwa ithe kayifuni nokumbona egijima ekilabhini yakuleli kodwa angadlala noma yikuliphi elinye ilizwe.
“ISundowns beyazi ukuthi kunamakilabhu amfunayo kuleli abe-mhlohla ukuba anqamule inkontileka yakhe ukuze amthathe.
“Ibubambile ubutsotsi yabe isimsayinisa amaphepha okufane nokuthi abemudingisa ukudlala kuleli njengoba abethi angalokothi nje asayine ekilabhini yakuleli. Ngisho angenzani ngeke aphinde adlale kuleli uma iSundowns ingamkhululile,” kusho umthombo.
Imizamo yokuthola iSundowns ukuba iphawule ngalolu daba iphunzile kwazise ibinomdlalo weligi ne-Orlando Pirates izolo ngoLwesithathu ebusuku e-Orla-ndo Stadium, eSoweto.
Previous articlei-iron duke icacisa ngo-lorch norhulani
Next articleBaphinda enkantolo abakwaShembe
Izingane ziweliswa ngabazali emfuleni 13th Feb 2020
Isazi samasiko siyakhala ngokungalandelwa kwesintu 13th Feb 2020
Umdlali waseMphithi ulibangisa eSpain 13th Feb 2020
UNyazi luqhoshele izimbangi ngeziqu 10th Feb 2020